SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: Some more News
Thursday, August 20, 2009 » 07:41pm
John Yettaw says he has no regrets about his secret swim to the home of Burma's detained democracy leader.
Skype may be axed
Oliver star claims he is Paris' father
Wife's Playboy pics led to abuse - cop
Woman sets herself on fire and shops
The mum 'locked' in her own body
John Yettaw says he has no regrets about his secret swim to the home of Burma's detained democracy leader, saying he would do it again 'a hundred times'.
Yettaw spoke on Wednesday to The Associated Press before he boardedaplane from Chicago to Springfield, Missouri - his final stop on his journey home.
The 53-year-old Missouri man was sentenced to hard labour for visiting the home of Burmese democracy icon Aung San Suu Kyi. Yettaw was deported on Sunday afteraUS senator intervened and won his release.
Yettaw has testified that he swam to Suu Kyi's house to warn her that he hadavision she would be assassinated.
He told AP that if he had to do it again, he would 'a hundred times to save her life'.
ကြံ့ဖွံ့ အတွင်းရေးမှူး ဌေးဦး ဂျပန်ရောက်ရှိ
ဒီပဲယင်း အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွင် တရားခံတဦးအဖြစ် အများ ယုံကြည်နေကြသူ ဌေးဦး ယနေ့ ဂျပန်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဟုသိရပါသည်။
New Otani Hotel တွင် တည်းခိုနေသည်ဟု သိရပါသည်။ ဟိုတယ်၏ လိပ်စာမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အီးမေးမှ ပေးပို့ လာသူများ၏ ရေးသားချက် အချို့ ကိုပါ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Hotel New Otani ဆိုတာ Yotsuya မှာရှိတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းပေးကြပါ။ အမြန် ပြင်ဆင် စေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေလည်းဂျပန်က ဆန္ဒပြမယ့် အစီအစဉ်ကို စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းလာကြပါတယ်။ ဌေးဦးဟာ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲရဲ့ တရားခံ တဦးပါ။ ဒီပဲယင်း အပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မေးခွန်းတွေကို ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် မထေမဲ့မြင် ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားသူပါ။ ဆန္ဒပြပွဲတွေ အမြန်စီစဉ်ပေးစေလိုပါတယ်။
http://demowaiyen. blogspot. com/
ဒီပဲယင်း လူသတ်ပွဲကြီးနဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး လူသတ်ပွဲကြီးရဲ့ အဓိက စီစဉ်ညွှန်ကြားသူထဲမှာ ဌေးဦးလည်း ပါတယ်။ ဒီလိုလူက နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး လူကြီးလူကောင်း ဟန်ဆောင်လာတာကို ခွင့်မပြုသင့်။ ရသလောက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ လိုတယ်။
လာမယ့် ဂျပန်အောက်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ တစ်ပေးခံနေရတဲ့ အတိုက်အခံပါတီကို ကြံ့ဖွတ်က လာတွေ့ တာကို ထောက်ရင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဌေးဦး အပါအဝင် ကြံ့ဖွတ်တွေရဲ့ ကလိမ်ကကျစ် ရည်မှန်းချက်ကို ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်တယ်။
ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေ ဂျပန်ကို ဖိအားပေးဖို့ လိုပြီ။